“Sawirro” Qoys Dagan Magaalada Burco oo gurigoodi lagu sixray iyo Culumo Quraan ku soosaartay Sixirkii loo aasay!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO “Sawirro” Qoys Dagan Magaalada Burco oo gurigoodi lagu sixray iyo Culumo Quraan ku soosaartay Sixirkii loo aasay!!
“Sawirro” Qoys Dagan Magaalada Burco oo gurigoodi lagu sixray iyo Culumo Quraan ku soosaartay Sixirkii loo aasay!!
Dec 22, 2016MAQAALO, MUUQAAL
Timo, saddex mismaar , sadde lafood oo timira ah , qardhaas, malmal iyo xildiid oo ku aasnaa dhinaca guriga qoyskii Burco ee cuntadu iska badalaysay ayaa laga soo guray oo la gubay , waxaana lagu sheegay in uu ahaa Sixir loo qabtay qoyskan. sidaa waxa sheegay Sh. jaamac cismaan oo ka mid ah culimada quraanka iyo dhirta ku daawaysa ee Burco oo ku dabajiray xaalada qoyskan iyo waxa haystaa waxa ay yihiin .
Qoyska oo aan la xidhiidhay goordhawayd si aan wax uga ogaado in cuntooda iyo cabitaankoodu caadi ku soo noqdeen iyo inkale, ayaa ii xaqiijiyey in ay hal mar arkeen biyaha oo isbadalay , shaah ay karsadeena aanu isbadalin walina tijaabo iyo kawarsug ku jiraan .
ilaa iyo hadda lama odhan karo dhacdadii way soo afgoday balse rajo wanagsan ayaa soo muuqta.
Xigasho Cabdimaali muuse
Muuqal horay looga duubay Halkaan hoose kadaawo
Previous PostMatalayaasha Maamulada C/kariin Guuleed, Shariif Xasan iyo Cali Cosoble oo looga yeeray Addis Ababa!! Next PostDaawo Sawirro: Baarlamaanka Kenya oo gacmaha iskula tagay iyo Xildhibaanada Mucaaradka oo Dacwo u aaday!!